Xog: Dagaal aan waxba la isku reeban kadib Muxuu salka ku hayaa Heshiiska Xasan Sh iyo Sh Shariif,? – Hornafrik Media Network
TOOSHKA HORNAFRIKWARARKA MAANTAXULASHADA
KAMAPALA – Xiriirka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh oo mar isku wanaagsanaa ayaa mar qura xumaaday kadib markii Xasan Sheekh uu kaga guuleystay Sheekh Shariif doorashadii madaxweyninimo ee kadhacday Soomaaliya sanadkii 2012.
Xiligaa wixii ka dambeeyay, labada siyaasi waxaa ka dhex dhalatay loolan iyo neceyb ku saleysan siyaasad oo soo jiitamayay mudo ku dhow sanad, taasoo keentay inay kala irdhoobaan Labada Hogaamiye ee Madaxwayayaasha ka soo noqday Somalia.
Hayeeshee, ugu dambeynti waxaa timid arin lama filaan ah, kadib markii labada siyaasi ay ka qeyb galeen xaflad aroos ah oo kadhacday magaalada Kampala ee caasimada Uganda, halkaasi oo si kedis ah loo kulansiiyay, kadib markii siyaasiyiin ay isku dhawaayeen labada madaxweyne hore ee Soomaaliya ay ka shaqeeyeen dib u heshiisiintooda.
Waxey noqotay marki ugu horeysay ee ay indhaha isa saaaraan Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif oo mudo ay u dhaxeysay colaad shaqsiyadeed iyo mid siyaasadeed. Marna lama fileyn iney dib u soo celin doonaan saaxiibtinimadoodi dhamaatay mustaqbalka dhaw.
Dadaal gaaban kadib, ayey suurto gashay iney gacanta is galiyaan labada siyaasi, xabadkana ay isa saaraan ka hor inta aysan meel gees ah ula bixin kuraas halkaasi taalay oo ay ku yeesheen kulan ay hareeyeen dhoolo cadeyn iyo sheekooyin hore.
Kulankaasi ayaa ka dhignaa gaba gabada colaadi u dhaxeysay labadan siyaasi oo Labo Xilli oo isku xiga Madaxwaynayaal soo noqday.
Iyadoo xiriirka labadani nin uu u soo noqday si lama filaan ah, waxaa muuqata in saaxiibtinimada cusub ay muujineyso iney wada yeelanayaan hadaf siyaasi oo mideyn kara, kaasi oo ah isbaheysi siyaasadeed ee an horay loo fileynin.
Sida uu qoray wargeyska Kenya kasoo baxa ee Alleastafrica, Kulanka iyo soo celinta xiriirka Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaa si weyn u muujinaya dhaqan ka dhex jiray siyaasada Soomaaliya waqti dheer, kaasoo ah in marka siyaasiyiinta uu ka dhaxeeyo tartan siyaasadeed iyo colaad shaqsiyadeed ay ku heshiiyaan si ay u meel mariyaan hadafyadooda siyaasadeed.
Siyaasiyiinta qaar ee heshiiya ayaa ugu dambeyn isku dhaca marka ay timaado isku dhac daneed ee labada dhinac ah waana wax mar waliba lagu arko dhamaan fagaarayaasha siyaasada aduunka.
Si kastaba ha’ahaatee, kulanka labada masuul oo mudo saacado ah qaatay ayaa kudhamaaday is gacan qaad iyo heshiis saaxiibtinimo ay wada qaateen xili ay gaba gabo ku dhaweyd xafladi arooska ee labaduba ay ku casuunaayeen.
Si kastoy ahaataba, dadka siyaasada falanqeeya ayaa muujiyay suurto galnimada in isbaheysi siyaasdeed ee ay sameystaan labada siyaasi ee miisaanka leh ay culeys siyaasadeed ku furi karto madaxweynaha iminka xilka haya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo kaga guuleystay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud doorashadi madaxweyninimo ee ka dhacday magaalada Muqdisho 8-di bishi February ee 2017.
Dad kudhow labada madaxweyne hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif oo labaduba leh xisbiyo siyaasadeed ayaa sheegaya in kadib soo celinti saaxiibtinimadi ka dhaxeysay ay iminka ku dhaqaaqi doonaan talaabo ay dib ugu abaabulayaan isbaheysi siyaasadeed, kaasi oo laga yaabo inay uga faaideystaan dowlada iminka jirta, iyagoo tilmaami doona waxyaabaha ay ku fashilantay,iyo balanqaadyadi xiliga doorashada ee ay fulin weysay oo ay kamid yihiin xakameynta musuq maasuqa, nabadeynta casimada sanadka ugu horeeya iyo abuurida fursado shaqo.
Hase yeeshee, madaxweyne Farmaajo ayaa laga yaabaa ineynan walaac badan ku heyn doonin isbaheysiga labada madaxweyne hore ee Soomaaliya, laakiin ay u badantahay inuu ka walwalo saameynta ay ku yeelan karaan gudaha baarlamaanka iyagoo isticmaalaya xildhibaano daacad u ah oo laga yaabo iney culeys ku furaan dowladiisa.
Isticmaalka mooshin laga keeno madaxweyne ayaan inta badan ka jirin Gudaha Siyaasada Soomaaliya, Balse dhowaan Sannadkan oo kaliya 2 Madaxwayne Goboleed ayaa Xilkoodii ku waayay Mooshino ay ka keeneen Xildhibaano, taasoo ah qalqal siyaasadeed ku soo kordhay Somalia.
Maadaama labada madaxweyne ee hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ay doonayaan iney sameystaan isbaheysi siyaasadeed, dadka siyaasada odorasa ayaa tilmaamay in looga fadhiyo xoojinta saldhigooda siyaasadeed iyo iney dib u hantaan saameynta culus ee ay mar ku lahaayeen siyaasada wadanka.